Displaying 61-70 of 194 results.
सेनाले किन माग्यो आधा खर्ब थप रकम ?
काठमाडौं, १६ फाल्गुन । नेपाली सेनाले पाँचवटै पृतनामा सुविधासम्पन्न हवाई बेस निर्माण र अत्याधुनिक हेलिकप्टर खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा हवाईजहाज प्रयोग र आपतकालिन उद्धार, राहत तथा कारवाहीमा आवश्यक सामाग्री खरिदका लागि सरकारसँग थप रकम मागेको नागरिकमा.. .. ..
...कतै तिम्लाई नि राजदुत बनाइद्यो कि क्या हो हँ ?
काठमाडौं, १६ फाल्गुन । आज काठमाडौंबाट प्रकाशित अधिकांश अखवारले कार्टून प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले सरकारले राजदूतका लागि गरेको सिफारिस विवादित बनेको बारे अविनको ब्यंग्यत्मक कार्टून प्रकाशित गरेको हो ।
कांग्रेसबाट सिफारिस आशा र फोरम लोकतान्त्रिकबाट सिफारिस शर्मिलाको नाम राजदूतबाट फिर्ता
काठमाडौं, १६ फाल्गुन । सरकारले युएई र ओमानका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दुई महिलाको नाम फिर्ता लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषको बैठकले कांग्रेसको कोटाबाट युएईका लागि सिफारिस भएकी आशाकुमारी लामा र फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट ओमानका लागि सिफारिस भएकी शर्मिला
संविधान संशोधन गर्न सिरहामा नयाँ शक्तिद्धारा सिटी जुलुस प्रदर्शन
सिरहा, १५ फाल्गुन । संविधान संशोधन गर्न दबाब स्वरुप नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल सिरहाले आज गोलबजारमा सिटी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । पार्टीको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सिटी जुलुस निकालिएको हो ।
गोलबजारस्थित प्रहरी कार्यालय नज
यि हुन् पेस्तोल देखाएर एक लाख लुट्ने झापाका लुङ्गेली मगर
झापा, १५ फाल्गुन । वित्तीय संस्था लुटपाटको आरोपमा प्रहरीले झापाको बाहुनडाँगीबाट एकजनालाई हतियारसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापा बाहुनडाँगी–४ का पूर्ण लुङ्गेली मगर छन् ।
मगरलाई शनिबार प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो
रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आगजनी
काठमाडौं, १४ फाल्गुन । प्रदर्शनी मार्गको रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा शनिबार साँझ आगजनी भएको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन शनिबार साँझ ६ बजेतिर निर्वाचन समितिको कार्यालय नजिकैको स्टोर कोठामा आगजनी भएको हो ।
मासु खाँदा होसियार ! पोखरामा बर्डफ्लू देखियो
पोखरा, १४ फाल्गुन । लामो समयपछि फेरि बर्डफ्लू देखा परेको छ । जिल्ला पशु कार्यालय पोखराले दिएको जानकारी अनुसार १८ खाल्टेमसिनामा बर्डफ्लू देखा परेको हो । पोखरा १८ खाल्टेमसिनाकी मीना परियारले फागुन ६ गते एउटा हासँ मरेपछि परीक्षणका लागि पशु कार्यालयमा ल्याइन् ।
सिरहामा छाडा राँगाको आक्रमणमा परेर एकको मृत्यू, एक घाईते
सिरहा, १४ फाल्गुन । सिरहामा छाडा छोडिएको राँगाले हानेर शुक्रबार एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाईते भएकी छन् ।
पिप्रा गाविस १ बस्ने ६५ बर्षिया मुसर्नी देवी साहलाई आफ्नै घरमा बसिरहेको अबस्थामा अचानक छाडा रांगाले आक्रमण गरेको थियो । राँगाको
लुटपाट गर्दागर्दै चार युवक मोरङमा पक्राउ
मोरङ, १४ फाल्गुन । मोरङको भातिगंज गाविस २ स्थित शुक्रबार राती भित्री सडकमा मादक पदार्थ सेवन गरी लुटपाट गर्न खोज्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा मोरङ भातिगंज २ बस्ने ३० बर्षियको पशुपती राजबंशी, बर्ष ३० को धनिराम राजबंशी, ब
भोलीबाट लहानमा पुरुष भलिवल प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार १ लाख
सिरहा, १४ फाल्गुन । सिरहाको लहानमा भोलीबाट सृजना सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजनामा दोस्रो खुल्ला पुरुष भलिवल प्रतियोगिता हुने भएको छ । उक्त भलिवल प्रतियोगितामा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरु विभागिय टीम र भारतीय टीमको समेत सहभागीता रहनेछ । खेलमा प्रथम हुने टी.. .. ..